Soo dejisan FreeMind 1.0.1 iyo 1.1 beta – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware kaleFreeMind
Qeybta: Software kale
Bogga rasmiga ah: FreeMind
FreeMind – software ah loo arki qorshayaasha iyo fikradaha foomka of nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan qorsheyaasha ee kala duwan iyo qaababka, ku dar links, erayada search, qaybo ka mid ah jaantus iwm FreeMind qarin siinayaan shaqada sanamyadooda, qoraalka iyo loox oo qiyaaso iyo qaabab kala duwan. Software ka kooban qalab badan si loo ballaariyo iyo reserved qorsheyaasha. FreeMind sidoo kale Kuu ogolaaneysa inaad xakameyso qaybo gaar ah oo qorsheyaasha iyo maareeyo software isticmaalaya hotkeys.
Waxay abuurtaa oo maamusha qorsheyaasha
Taageerada noocyada kala duwan iyo qaababka nidaamkani oo
Taageerada qaabab file kala duwan
Qalab badan oo ay u Customize
Soo dejisan FreeMind
Tool soo saari fikradaha kala duwan ama hawlaha qaab ah gobollada. Software ayaa awood u si ay u ilaaliyaan gobollada ka dhanka ah helaan ogalayn oo uu la sirta ah.
Faallo ku saabsan FreeMind
FreeMind Xirfadaha la xiriira
Easy Cut Studio – softiweer si aad u daabacdo, u naqshadeyso una jajabiso noocyo kala duwan oo garaafyo ah adigoo isticmaalaya goynta vinyl ama goynta mashiinka.
Software la set ka mid ah muuqaalada sare inay la shaqeeyaan scanners. Software wuxuu isticmaalaa filtarrada iyo qalab kala duwan si ay u gaaraan wax soo saarka weyn.
Software-ka waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo sawirrada dhijitaalka ah ujeedada ah in ay ku helaan internetka waxayna taageertaa habka isbarbardhigga asalka ah ee asalka ah ee sawirka loo beddelay.
Lightshot – barnaamij yar oo software ah oo lagu abuurayo shaashadda oo leh tifaftireyaal gudaha ku dhisan iyo is-dhexgal dareen leh.